HALYEYGII HAN-KA LAHAA. (Mursal Ismaaciil Ciise Jalwiye) | puntlandi.com
HALYEYGII HAN-KA LAHAA. (Mursal Ismaaciil Ciise Jalwiye)
Mursal Ismaaciil Ciise Jalwiye
Dadku hadaf iyo hiigsi way wada yeelan karaan. Balse kama wada dhabayn karaan, Sababaha ugu badan ee ka hor istaaga himiladaasina waxa kamid ah qorshe la’aan. Waa hubaal in qofku uu ku khasban yahay, in uu qaado tallaabooyin dheeraad ah oo awood u kordhinaya, si uu ugaaro ujeedkiisa ugana run sheego gaaridda yoolkiisa.
Mursal Ismaaciil Ciise Jalwiye , wuxuu dhashay dhamaadkii 70-naadkii, wuxuu kudhashay baadiyaha tuulada Gurur ee katirsan Gobolka Bari Somalia. Markii ugu horraysey uu wax qoro ama akhriyo qiyaastii wuxu jirey 22-sano, bishii November 2003-dii ayuu tagay dalka Sweden.
Mursal wuxuu bilaabay kobcinta gaardkiisa iyo aqoontiisa , si uu ula jaanqaado wacyiga dalka uu tagay. Wuxuu waxbarasho ka bilaabay Private, kadibna wuxuu ugudbay Dugsiga waxbarashada dadka waaweyn (Vuxenutbildnid) ee dalka Sweden illaa uu ka dhameeyay.
Astaanta Xisbiga Doogga (Green Party) ee Dalka Sweden.
Hammigiisa oo sarreeyay iyo hiigsigiisa oo u calaamadaysnaa, waxey dhaxal siiyeen Sanadkii 2010-kii in uu u tartamay Golaha Gobolka Dalarna ee dalka Sweden balse kuma guulaysan. Mursal maquusan e Sanadkii 2014-kii waxa uu u tartamay Golaha Deegaanka ee Degmada Borlänge iyo Golaha Gobolka Dalarna iyo waliba Xubinnimada Guddiga fulinta Xisbiga Doogga (green party) ee heer Qaran. Waxaana xusid mudan Dhammaan jagooyinkaas wuu ku guulaystay, hammigiisiina wuu gaaray Mursal. 20 Oct 2014-kii Mursal waxaa loo doortay Gudoomiye ka mid ah gudoomiyeyaasha Gobolka Dalarna (County council Commissioner) ee Dalka Sweden. Sidoo kale Mudane Mursal wuxuu kamid yahay Asaasayaasha kooxda barafka kuciyaarta ee Somali Bandy.
Mursal oo kaqayqaadanaya munaasabad dhaqan, oo kadhacday Gobolka Dalarna ee dalka Sweden.
Mursal Ismaaciil Ciise , Majirto dowlad gacan qabatay, qabiil taageeray iyo cid gaara oo dhaqaale kubixisay, si uu ugaaro meesha uu higsanayay. Balse Dulqaad, Hiigsi dhow iyo mid fog, Dadaal, Niyad wanaagsan oo lagu laray go’aan kudhisan karti iyo doonitaan dhab ah ayuu ku noqday waxa uu yahay.
Mursal Ismaaciil Ciise, waa muwaadin soomaaliyeed oo waxtar leh, samafale aan kadaalin daboolidda baahiyaha dadka dan-yarta ah iyo gacansiintooda, waa hoggaamiye da’yar, karti leh, markastana utaagan Dhiirrigelinta dhalinyarada. Masuuliyadda sare uu hayo, ma ilowsiin dalkiisa iyo dadkiisa ubaahan, wuxuu booqashooyin kuyimaada sannad kasta dalkiisa hooyo –Soomaaliya-, sannadkaan aan kuguda jirno Bishii Luulyo 2017, wuxuu yimid Dalkiisa hooyo isagoo waliba waday deeqo raashin ah kuwaas oo uu ugu talagalay Dad-danyar ah oo kukala sugan Gobolada dalka oo dhan sida Gobolka Banaadir , Shabeelada dhexe, Nugaal iyo Bari.
Mursal oo dushiisa kuwada Deeq raashin uu soo gaarsiiyay Gobolka Nugaal gaar ahaan Awr-Culus – 2017.
Mursal Ismaaciil Ciise, 2018-ka waa musharax utaagan mar kale jagada Gudoomiyaha Gobolka dalarna oo uu hadda isagu hayo, sidoo kale waa musharax u tartamidoona sidii uu uga mid noqon lahaa Xildhibaanada dalka Sweden. Mar Saxaafadda Sweden wax laga weydiiyey Waa Kuma Mursal Ciise? , waxey kusoo koobeen “Waa qof leh ujeedo fog, dejiyayna qorshihii iyo nidaamkii uu ku gaari lahaa yoolkaas”.
Mursal wuxuu kor uqaaday magaca umadda soomaaliyeed, waxaan u rajaynayaa horay usocod iyo guul waarta.
Qalinkii: Aadam Salaad Maxamuud – Badiic. Ademsalad@gmail.com